Dhalinyaro soomaliyeed oo Tababar ku saabsa habeynta Af-Soomaliga iyo suugaantiisa logu qabtey Muqdisho | Somali National Television - sntv.so
Home BENAADIR Dhalinyaro soomaliyeed oo Tababar ku saabsa habeynta Af-Soomaliga iyo suugaantiisa logu qabtey...
Dhalinyaro soomaliyeed oo Tababar ku saabsa habeynta Af-Soomaliga iyo suugaantiisa logu qabtey Muqdisho
Akadeemiyad Goboleedka Af- Soomaaliga ee “AGA” ayaa tababar ku saabsan habeynta Afka Soomaaliga iyo Suugaantiisaba u qabatay 50 dhalinyaro ah oo daneeyneysa Akhriska iyo qoraaka Afkeena hooyo.
Guddoomiyaha Naadiga Akhriska iyo Qoraalka ee Hilin iyo Hayaan C/qaadir Cabdi “Jubba” ayaa uga mahadceliyay Akadeemiyada AGA tababarka ay u qabatay dhalinyarada ka tirsan naadigaasi, wuxuuna kula dardaarmay dhallinyaradaasi in ay ka faa’iideystaan casharrada ay ka qaadanayaan aqoon isweydaarsigan.
Qaar ka mid ah dhallinyaradi loo qabtay tababarkaasi ayaa muujiyay sida ay ula dhacsanyihiin aqoon isweydaarsigan ku saabsan habeynta qoraalka iyo akhriska afka Soomaaliga, iyagoo codsaday in la joogteeyo tababarrada noocan oo kale ah.
Guddoomiyaa Akadeemiyada AGA Prof. Maxamed Daahir Afrax oo tababarkaasi furay ayaa sheegay in Akadeemiyadu ay dhiirigelineyso cid kasta oo daneyneysa horumarinta Af Soomaaliga, isagoo ku boorriyay dhallinyarada Soomaaliyeed iney u soo jeestaan sare u qaadidda Akhriska iyo qoraalka Afkeena.
Tababarkan oo loo qabtay 50 dhalinyaro ah oo isugu jiray wiilal iyo gabdho ayaa la xiriira habeynta qoraalka iyo ku hadalka afka Soomaaliga iyo suugaantiisa, waxeyna arrintani ay qeyb ka tahay qorshayaasha Akadeemiyad goboleedka Afka Soomaaliga ay ku horumarineyso Afkeena hooyo.
Previous articleGarsoore Soomaali ah oo loo doortay guddoomiyaha Maxkamadda adduunka ee Hague
Next articleJaaliyadda Soomaaliyeed ee Dalka Sudan oo ka qeyb gashay bandhig Dhaqameed ay ka qayb galeen in ka badan 86 dowladood